Mizara Turrón de Doña Pepa Ao Colombo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Janoary 2018 8:33 GMT
Turrón de doña Pepa. Sary avy amin'ilay mpisera Alejandro Matos (CC BY-NC-ND 2.0).
Vonona hatrany hizara ny tsara avy amin'ny fireneko miaraka amin'ireo mpikambana namako ao amin'ny GV, nitondra voankazo Peroviana aho. Nitondra mazamorra morada sy chicha morada ho an'ilay olona tsy fantatro homena fanomezana sy ho an'ireo namana sasany aho. Nitondra turrón de doña Pepa ihany koa aho mba hizara ho an'ireo mpikambana GV maro araka izay azo natao.
Tamin'ny fomba nentim-paharazana, tsy hita afa-tsy amin'ny volana Oktobra ny turrón de doña Pepa, volana iray mifandraika amin'ny Tompon'ny Fahagagana [mg] sy ny Foibe Manan-tantara Lima. Ankehitriny anefa, afaka mahita turrón mandritra ny taona ianao ary tsy mila miandry volana iray manokana vao afaka mividy izany.
Mpikambana telo tao amin'ny GV no nanontany ahy hoe nahoana aho no tsy nitondra cebiche. Cebiche dia nahandro Peroviana malaza. Izahay Peroviana dia mirehareha am-pahasahiana amin'ny nahandronay, ka nahatonga ahy nitsiky ny reharehako amin'ny firenena, “Tsy misy cebiche tamin'ity indray mitoraka ity, ry zalahy. Fa turrón aloha andramana”.